Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Culus oo Ka Dhacay Caasimada Dalka Afqaanistaan.
Qarax Culus oo Ka Dhacay Caasimada Dalka Afqaanistaan.
Posted by ONA Admin	/ January 28, 2018
Qarax aad u culus ayaa laga maqley magaalada Kaabuul ee caasimada dalka Afqaanistaan, sida ay ku soo waramayaan wakaaladaha wararka ee caalamiga ah. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah, sidoo kale goobtaas waxaa ku ag dhawaa safaaradaha dalalka shisheeye ku leeyihiin Kaabuul.
Qaraxa laga maqley kaabuul waxaa sababey gaadhi bom lagu soo xidhay kaas oo la dhigey xarun Boolis dhinaceeda. Waxaa ku geeriyooday 95 qof qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida laga soo xiganayo dad goob joog ah, waxaa dhici karta in tirada dhimashadu kor u kacdo.
Dadka ugu badan ee ku dhintay weerarka waxay ahaayeen shacab marayay wadada caanka ah ee “Chicken Street” xilli uu jiray mashquul badan, oo dadkuna ka dukaamaysanayeen goobaha Ganacsiga. Ma jirto cid shaagatey masuuliyadda weerarkan, Malayshiyaadka ururka Talibaan iyo weliba kuwa IS ayaa dagaal kula jira Dowladda Afqaanistaan iyo ciidamada shisheeye ee dalkaas ku sugan.